I-Apple isebenza ochungechungeni lwe-TV oluvela kuqoqo lwezincwadi ze-Isaac Asimov Foundation | Ngivela kwa-mac
U-Apple usebenza ochungechungeni lwe-TV oluvela eqoqweni lezincwadi i-Isaac Asimov Foundation
Namuhla, nokuthi umphakathi jikelele uyazi, I-Apple ivale cishe amaphrojekthi ayi-12 ngendlela yochungechunge lwe-TV ukuletha insizakalo yevidiyo yokusakaza futhi phakathi kwayo okuvelele isizini entsha ye-Amazing Stories, uchungechunge olwenziwe nguSteven Spielberg maphakathi nawo-80s.
Kepha insizakalo yevidiyo entsha yokusakaza ayakhiwe nje kuphela ngedrama kanye nochungechunge lwamahlaya, yize iningi likhona, kepha abafana baseCupertino basebenza kwimikhiqizo yethelevishini ehlukahlukene njengokulungiswa kochungechunge lwencwadi ye-Isaac Asimov Foundation.
Uchungechunge lwezinganekwane zesayensi eyenziwe yinkampani yokukhiqiza i-Skydance ithelevishini, okwamanje iyathuthuka nokuthi i-Apple ifuna ini ngokusakaza kwayo ividiyo.
Inkampani yokukhiqiza iSkydance, ithenge amalungelo ochungechunge lwezincwadi zeSisekelo, futhi kusukela manje kuqhubeke, yini ezoba ngabakhiqizi abakhulu nababonisi uDavid S. Goyer noJosh Friedman Bebelokhu besebenza ekuguquleni i-TV.
UDavid S. Goyer usebenzile ebhayisikobho kumafilimu anjenge I-knight emnyama y Batman Begins nguChristopher Nolan, ngenkathi uJosh Friedman esebenze ekukhiqizweni kwe- I-Termnator: IziKronike zikaSara Connor futhi ku Emerald Idolobha.
I-Foundation Series iqoqo lokungenani Izincwadi eziyi-16 zesayensi ebhalwe ngu-Isaac Asimov, phakathi kweminyaka yama-40s, 50s kanye nama-80s.Lolu chungechunge lulandela isazi se-psychohistory kanye nesazi sezibalo uHari Seldon, okwazi ukubikezela ikusasa.
USeldon udala iqembu elibizwa ngeSisekelo ukugcina ulwazi lwesintu lonke ngaphambi kokuwa koMbuso waseGalactic. Amanoveli athatha iminyaka eminingi futhi ahlanganisa ukukhuphuka nokuwa kwemibuso eminingi, ngakho ukuyivumelanisa nombukiso wethelevishini akuyona into elula.
Amahemuhemu okuqala akhuluma ngokuqaliswa okungenzeka kwale sevisi yokusakaza ividiyo iphakamisa ukuthi, ekuqaleni, Ephreli 2019 Kungaba yinyanga yokwethula emphakathini lokhu kubheja okusha okwenziwe ngabafana baseCupertino ngokusakaza ividiyo, ukubheja okuzobusa ngenxa yokushoda kolimi olungcolile, ubulili, udlame nobunqunu, ngoba i-Apple ifuna konke okuqukethwe kukholwe ilungele zonke izethameli futhi ingadlalwa kunoma yisiphi isitolo se-Apple.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » U-Apple usebenza ochungechungeni lwe-TV oluvela eqoqweni lezincwadi i-Isaac Asimov Foundation
I-Krita, ithuluzi lokudweba nokubonisa ngamadijithi
Ama-Vimeo debuts njengohlelo lokusebenza ku-Mac App Store